China Iibheringi iibheringi iibhloko iibhedi kunye nabathengisi | Xinri
● Umsebenzi osisiseko kufuneka ufane nalowo weebheringi zebhola emseleni.
● Inani elifanelekileyo learhente yoxinzelelo, akukho sidingo sokucoca ngaphambi kofakelo, akukho sidingo sokongeza uxinzelelo.
● Kusebenza kwiimeko ezifuna izixhobo ezilula kunye namacandelo, afana noomatshini bezolimo, iinkqubo zothutho okanye oomatshini bokwakha.
Ibhloko yomqamelo ethwele okunene iyantlukwano yebhola ye-groove enzulu. Isangqa sayo sangaphandle sangqa sangaphezulu sangaphezulu sijikeleze, esinokutshatiswa kwisitulo esihambelanayo sokungqengqa esijikelezayo ukuze sidlale indima yokulungelelanisa. Ukuthwala okujikeleze ngaphandle kusetyenziselwa ukuthwala imithwalo edibeneyo kunye ne-axial e-imithwalo ebonakalayo. Ngokubanzi, ayifanelekanga ukuba ithwale imithwalo ye-axial iyodwa.
Ububanzi bayo bangaphandle bungqukuva, obunokufakwa kumhlaba ohambelana nomda wokungqengqa kwesihlalo sokudlala ukuze udlale indima yokulungelelanisa. Iibheringi zebhloko yomqamelo zisetyenziselwa ukuthwala imithwalo edibeneyo kunye ne-axial edityanisiweyo, ikakhulu imithwalo ebusazinge. Ngokubanzi, ayifanelekanga ukuba ithwale imithwalo ye-axial iyodwa.
Ukumelana 1.Low zochuku, ukusetyenziswa kwamandla eliphantsi, ukusebenza ngoomatshini eliphezulu, kulula ukuqala; Ukuchaneka okuphezulu, umthwalo omkhulu, ukunxiba okuncinci, ubomi obude benkonzo.
Ubungakanani 2.Standardized, interchangeability, ufakelo lula disassembly, ulondolozo lula; Icwecwe lesakhiwo, ubunzima bokukhanya, ubungakanani obuncinci be-axial.
3. Ezinye iibheringi zinokusebenza kokuzilungelelanisa; Ukulungele ukuveliswa kwemveliso emininzi, umgangatho ozinzileyo noluthembekileyo, ukusebenza kakuhle kwemveliso.
4. Ukuhanjiswa kwefosque torque kungaphantsi kakhulu kunesithsaba soxinzelelo olunamandla, ngenxa yoko ukunyuka kobushushu kunye nokusetyenziswa kwamandla kusezantsi; Umzuzu wokuqala wokungqubana uphakame kancinci kancinci kunowomzuzu wokuxabana ojikelezayo.
5. Ubuntununtunu bokuthwala i-deformation ukulayisha utshintsho buncinci kunobo bokuhambisa i-hydrodynamic.
6. Ubungakanani be-Axial buncinci kunobo bokuthwala bendabuko be-hydrodynamic; Iyakwazi ukumelana zombini kunye nemithwalo edibeneyo.
7. Uyilo olwahlukileyo lunokufezekisa ukusebenza ngokugqwesileyo kuluhlu olubanzi lokulayisha ukuya kwisantya; Ukusebenza ngokusebenza akubalulekanga ekuguqukeni komthwalo, isantya kunye nesantya sokusebenza.
Ukusilela kwebhloko yomqamelo ethwele isihlalo
1. Ingxolo enkulu.Ngenxa yesantya esiphezulu sokujikeleza okungaphandle kwesihlalo, iya kwenza ingxolo enkulu xa usebenza.
2. Ulwakhiwo lwezindlu ezinamakhonkco luyinkimbinkimbi. Ukuze kuhlangatyezwane nokusetyenziswa kweentlobo ezahlukeneyo zeebheringi, uyilo lokuthwala izindlu luyinkimbinkimbi, kwaye izindlu ezizalayo zonyusa indleko zemveliso, zikhokelela kwindleko zizonke Ukuthambeka kwangaphandle kwesihlalo kuphezulu.
3. Nokuba iibheringi zi-lubricated kakuhle, zifakwe kakuhle, zingabinakungqina ngothuli kunye nobungqina bokufuma, kwaye zisebenza ngesiqhelo, ziya kuthi ekugqibeleni zisilele ngenxa yokudinwa komphezulu woqhakamshelwano.
Ukuthwala iibhloko zomqamelo zihlala zisetyenziswa kwimigodi, isinyithi, ezolimo, ishishini lamachiza, ukuthungwa, ukuprinta kunye nokudaya, ukuhambisa oomatshini, njl.
Egqithileyo Uthotho lwenqaku elinee-UCP ezingama-200 eziphezulu
Okulandelayo: Wheel Hub Ukunikela
Isantya esiphezulu sePillow Bearing
iibhloko umqamelo izindlu
unikezelo lwebhloko yomqamelo
Faka i-bearing kunye nezindlu e-UK
Radial faka iibheringi UCFA
I-XRL yokufaka uphawu lokuthwala kunye nekhola ye-eccentric SA
Uhlobo lwebrand XRL faka iibheringi ze-UCT200
Ixabiso lokukhuphisana lokufaka i-UC300
Faka uphawu lwe-XRL olune-UC200